Mary Elizabeth Winstead anovhura nezvekurambana pamberi paEwan McGregor kudanana - Nhau
Kuru Style Nhau Blog Varaidzo
Mary Elizabeth Winstead anovhura nezvekurambana pamberi paEwan McGregor kudanana
Anopfuura makore maviri apatsanuka kubva kumurume wake - uye achidanana nemukadzi wake 'Fargo' nyeredzi Ewan McGregor - Mary Elizabeth Winstead ari kuvhura nezve kurambana kwake.
Rich Polk / Getty Mifananidzo yeIMDb
Muhurukuro nyowani na Glamour UK izvo zvaakaita pamwe chete naye-nyeredzi kusimudzira iyo bhaisikopo nyowani 'Shiri dzeChikara (Uye Kunakidzwa Kusunungurwa kweOne Harley Quinn),' Mary - uyo anotamba Huntress muflick - akazivisa zvazvakaita kutanga mushure mekupedzisa muchato wake. kune munyori-director Riley Stearns. Vakaroora muna 2010 uye vakapatsanurana muna Chivabvu 2017 paakanga aine makore 32.
'Ndakarambana makore akati wandei apfuura, chinova chinhu chinotyisa, kupenga kwandiri nekuti ini ndanga ndichigara nemunhu mumwe chete kubvira ndaive nemakore gumi nemasere, uye ndizvo zvandaiziva,' Mary akaudza Glamour UK.
'Yese nzira kuburikidza neangu 20s ini ndanga ndichiedza zvakanyanya kuzvichengeta ndakafanana, nekuti chimwe chinhu chandakanzwa zvakanyanya kukura vanhu vaiti,' Iwe uri mukuru, usambochinja. ' Unogona kuzviisa pamoyo, nenzira isiri iyo, uye edza kuzvichengetedza kuti urege kukura zvakanyanya nekuti hauzive zviri kune rimwe divi, 'akatsanangura.
Donato Sardella / Getty Mifananidzo yeW Magazini
'Saka ndanga ndichitanga kutsva semunhu mukuru kekutanga muhupenyu hwangu [mushure mekurambana],' akawedzera. 'Kwandiri yaive nguva huru yekutendeuka, kuva wakanaka nekuchinja, kubvuma shanduko chinhu chakanaka uye kuti zvakanaka kuti usazive kuti shanduko iyi ichakusvitsa kupi.'
Imwe nzvimbo yakamutora? Mukudanana naEwan, izvo zvakakonzera kufungidzira kuti akange abiridzira mukadzi wake wemakore makumi maviri nemaviri. Mary haana kutaura naEwan kana hukama hwavo mune yeGlamour UK nyaya, asi iyo yekumashure yakanyatsoratidzwa: Mushure memifananidzo yaEwan naMaria vachitsvodana pane imwe cafe yeLondon yakaburitswa muna Gumiguru 2017, People magazine yakataura kuti mutambi anga akanyarara vakaparadzaniswa naEve Mavrakis , amai vevana vake vana, muna Chivabvu 2017 - iwo mwedzi iwoyo Mary naRiley vakasimbisa kupatsanurwa kwavo.
Zvinoenderana nemushumo waNovember 2017 mu Zuva , mutambi akaudza Eve, mugadziri wechiGreek-wechiFrench, muna Chivabvu uyo anga achidanana neyake nyeredzi 'asi akaramba achiti hapana chakaitika,' rakadaro pepanhau.
asa kubva kuma shahs ekuvira kwezuva mwana
Richard Shotwell / Zvakasiyana / REX / Shutterstock
Mary akaudza Glamor UK kuti kamwe kamwe kuva akazvimiririra mushure mekuparadzaniswa nerudo rurefu Riley 'zvachose' akamutya. 'Icho chave chiri chinhu chikuru kwandiri futi nekuti kukura ini ndaive naamai vaigara varipo vachichengeta zvese. Nekudaro, kusvika padanho rekuti ini handina kana crutch yekuvimba nayo kutarisira zvinhu kwave kuri kupa simba uye kukosha, 'akatsanangura.
Mary naRiley pavakarambana, vese vakatora kuenda ku Instagram kunogovana nhau. 'Kugara pano neshamwari yangu yepamoyo wandinoda nemoyo wangu wese. Takapedza hupenyu hwedu pamwe chete uye zvave zvizere nemufaro uye kudziya mazuva ese. Tafunga kuenda kumberi kubva kumuchato wedu, asi isu tichagara shamwari dzepedyo nevatinoshanda navo kwemazuva edu ese. Tichiri kukwira kana kufa, neimwe nzira ikozvino. Ndinokuda nguva dzose, Riley, 'Mary akataura chinyorwa chake achitsvoda Riley padama, sezvakataurwa Vanhu panguva iyoyo.
Riley, ane makore makumi matatu, akagovanawo mufananidzo, achitora chinyorwa chake, 'Isu tangotora mufananidzo uyu pamwechete. Ndakasangana naMary makore gumi nemashanu apfuura uye tanga tiri vanhu vakanyanya kukosha muhupenyu hweumwe neumwe kubvira. Hupenyu ihwohwo hwakazara nemanzwiro ese aungafungidzira uye isu takagamuchira zvese. Hupenyu haufungidzike hazvo. Tichiri tichiri mukati mehupenyu hwemumwe neumwe isu hatichazogare isu kurarama hupenyu pamwe chete. Isu tichiri kudanana zvakanyanya asi isu takasiyana vanhu vane nzira dzakasiyana uye ramangwana rakasiyana. Ini handigoni kumirira kuti ndione kwatinogumira tese. Ndichagara ndichikuda, Mary. '
Adele anokonzeresa kunetseka pamusoro pekudzikira uremu mumifananidzo kubva kuAnguilla pazororo
Aimbova Disney nyeredzi Orlando Brown akatongerwa kujeri
nikki bella achiri naJohn cena
ndiani lilly ghalichi akaroora
imbwa iyo bounty muvhimi nemukadzi wake